PVD ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိစာရွက်အကွာအဝေးနှင့်ဟိုတယ်နံရံများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လက်ဖ ၀ ါးပုံနှိပ်မျက်နှာပြင် - China Foshan Hermes Steel
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ 304 Stainless Steel Perforated ...
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Metal PlateSheet Price 304316L ...
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသံမဏိ 304 ဖောက်ထားသော ...
သံမဏိ ၃၀၄ ဖောက်ထားသည့်သတ္တုပြားများ ...
သံမဏိ ၃၀၄ Perforated Metal Mesh ဆန်အတွက် ...
Metal PlateSheet စျေးနှုန်း 304316L321 Perforated Stainle ...
304 သံမဏိဖောက်ထားသတ္တုဖန်သားပြင် SheetSta ...
အနိမ့်စျေးကွက် 1.4539 430 304 အအေးလိပ်အစွန်းအထင်း ...
စက်ရုံ SUS 304 316l Stai ကို Anti-slip S ...
အရောင် -HM နှင့်အတူသံမဏိစာရွက် Checker ကိုဖောင်းကြွ။
304 EmbossedCheckered finish သံမဏိစာရွက် P ကို ​​...
ပုံစံနံပါတ် - 201 304 316 430
အရှည်: 2000/2438/2500/3000/3048 မီလီမီတာ
အကျယ် 1000/1219/1250/1500 မီလီမီတာ
PVC: အနက်ရောင် - အဖြူရောင်ရုပ်ရှင် / လေဆာရုပ်ရှင် / ပိုလီရုပ်ရှင်
စံ: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
304 316 အလှဆင်ဆံပင်အချောသံမဏိစာရွက်ဓာတ်လှေကားဘောင်အလှဆင်ဘို့4× 8 ရွှေအနက်ရောင်အရောင်
၀.၃ မီလီမီတာ - ၃.၀ မီလီမီတာ
1000 * 2000mm, 1219 * 2438mm, 1219 * 3048mm, Max.width 1500mm ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
304.316, 201,430 စသည်တို့
Hairline + PVD အရောင်ခြယ်ခြင်း
နံပါတ် (၄)၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်၊ ကြေးမုံ၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ PVD အရောင်၊ ထိုးဖောက်ခြင်း၊ တုန်ခါမှု၊ သဲကန္တာရ၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊
POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL စသဖြင့်
PVC + ရေစိုခံစက္ကူ + ခိုင်ခံ့သောပင်လယ်ခံထိုက်သောသစ်သားအထုပ်
အသက် ၄၀ ကျော်
ယခင်: ဓာတ်လှေကား panel တံခါးတံခါးမျက်နှာကျက် panel ကိုများအတွက် 0.5mm-3.0mm 201 304 အလှဆင်သံမဏိစာရွက် hairline finish ကို
နောက်တစ်ခု: China manufacturer cheap price 201 304 etched stainless steel sheet for hotel room decoration2buyers
A1 ။ Hongwang အုပ်စုသည်အအေးခံသံမဏိလုပ်ငန်းသုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသံမဏိအတွေ့အကြုံကိုကျွမ်းကျင်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ ၁၂ နှစ်နီးပါးတွင်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်သားများ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Hongwang ၏နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဌာနဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို Hongwang စက်မှတိုက်ရိုက်ပေးပို့သည်။
A2.Hongwang ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ၂ ဝ ၁၃/၃၀၄ သံမဏိကွိုင်နှင့်စာရွက်များ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ဖောင်းကြွခြင်း၊
A3. ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်စစ်ဆေးမှုသုံးခုကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ၎င်းတွင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းစာရွက်များနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ ရက်မှ ၂၀ ရက်အတွင်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းတန်ချိန် ၁၅၀၀၀ ခန့်တင်ပို့နိုင်သည်။
A5.Opp စက်ရုံသည်အလိပ်တွင်ရှစ်ကြိမ်မြောက် roller roll၊ အအေးလှိမ့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများ၊ အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသုံးကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်ထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုထိရောက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Q6. တိုင်ကြားချက်၊ အရည်အသွေးပြproblemနာ၊ ဥပမာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်သနည်း။
A6.We မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့ရှိလိမ့်မည်။ အမှာစာတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှာစာကိုလိုက်နာရမည်။ တစ်စုံတစ်ရာသောတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ကိုယူပြီးစာချုပ်ပါအတိုင်းလျော်ကြေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏တုံ့ပြန်ချက်များကိုဖောက်သည်များထံမှစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားပေးသွင်းသူများနှင့်ကွဲပြားစေသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း။
Q7. ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူသူအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားမည်သို့ယုံကြည်စိတ်ချပါသလဲ။
A7. စာမျက်နှာ၏ထိပ်တွင်သင်သည်ဒေါ်လာ ၂၂၈၀၀၀ ဖြင့်ချေးငွေလိုင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအား alibaba တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောယုံကြည်မှုရှိစေရန်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မှာကြားမှု၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။
AISI 304 316 316L 430 1mm 1.2mm အရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင် Vib ...
0.8mm 316 ရှေးဟောင်းကြေးဝါတုန်ခါမှု ...
အခမဲ့နမူနာသံမဏိ 201 304 တုန်ခါမှု ...
နိမ့်စျေးနှုန်းကောင်းသောအရည်အသွေး 304 ကြေးအရောင်ဆံပင် ...
SUS 304 hl တုန်ခါမှုအပြီး 4ft x 8ft 2mm 3mm s ...